Lanonana marolafy :: Manomboka ireo hetsiky ny fetim-pirenena • AoRaha
Lanonana marolafy Manomboka ireo hetsiky ny fetim-pirenena
Efa tena ao anatin’ny volon’andro fanka- lazana ny tsingerin’ ny 59 taona niverenan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara isika, amin’ny alalan’ireo fandaharam-potoana amina lanonana ara-javakanto isan-karazany, ankoatra an’ireo fotoam-pivavahana samy hafa.
Nanomboka omaly , ohatra, ny « Soridian’ny faha- leovantena » na ny fitsidihina maimaim-poana ireo toerana manan-tantara voakasiky ny fikatsahana ny fahaleovantena izay karakarain’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana) ka haharitra hatramin’ny 6 jolay. Misy koa ny fampirantiana saripika, etsy amin’ny zaridaina Antaninarenina hatramin’ny 27 septambra 2019.
Ao anatin’ny fandaharam- potoana indrindra koa ireo fampisehoana hataona mpanakanto malagasy sy vahiny maromaro etsy amin’ ny kianjan’i Mahamasina. Hiavaka amin’ity indray mitoraka ity ny famindrana ny matso lehibe izay hanomboka amin’ny 2 ora tolakandro, eo ambany fiahian’ny Filoham-pirenena amin’ny 26 jona. Ny hariva amin’ny 7 ora ny fandefasana afomanga etsy Anosy, ary hofaranan’ny alim- pandihizana etsy Mahamasina.
Foana ny fisakafoanana
Tsy ny famindrana ny oran’ ny matso ihany no zava-baovao amin’izao fanka- lazana izao, fa hofoanana ihany koa ny lanonana fisakafoanana izay nanasana matetika an’ireo manam-pahefana malagasy sy solontena vahiny monina sy miasa eto amintsika, eny Iavoloha. Manery ny politikan’ ny fitsitsiana. Mandeha ny fihetsiketsehana rehetra amin’izao fotoana izao, toy ny fizarana saina maimaimpoana ataon’ny Polisim-pirenena any anatin’ireny fiara fitateram-bahoaka ireny sy eny an- dalam-be eny.
Momba ny fitsidihana sy ny fampirantiana ataon’ny Ortana manokana dia ho maimaim-poana ny hetsika rehetra, ka miainga isan’
andro etsy amin’ny zaridaina Antaninarenina manomboka amin’ny 10 ora maraina, avy eo hihazo an’ Ambohitsorohitra, Ambatonakanga, Ambatovinaky, zaridaina Andohalo, tsangambaton-dRatsimandrava, Ambohijatovo Ambany, hatreny amin’ny tsangambaton’ ny 29 marsa sy ny 26 jona.
Volasoa Randriamanantena / Nicoh Richman
Fikirakirana ny voka-pifidianana :: Niditra an-tsehatra tamin’ny fanamarinana teny ifotony ny HCC
Fametrahana zotra filamatra :: Fiara manodidina ny fitopolo voasazy tao anatin’ny roa volana mahery